Home » Lahatsoratra farany farany » Safety » Mialà amin'ny South Lake Tahoe, toerana iray ankafizin'ny mpitsidika
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny tanànan'ny California manontolo dia nafindra toerana tao amin'ireo trano fandraisam-bahiny nirehitra sy tadio
Ny afo dia nanimba trano efa ho 500, nandratra olona dimy, ary nandoro 177,000 XNUMX hektara mahery, raha ny angom-baovao avy amin'ny Cal Fire.
Ny mponina ao amin'ny Lake Lake Tahoe dia nasaina nita atsinanana androany.
Nandeha isam-baravarana ireo mpitandro ny filaminana mba hahazoana antoka fa nanaiky ny rehetra.
Olona 24,000 eo ho eo no efa nandao ny tranony teny amin'ny arabe mampitohy an'i South Lake Tahoe sy Sacramento.
Ny fanesorana tao an-tanànan'ny South Lake Tahoe malaza any Calfiornia dia tonga rehefa nanakatona ireo ala nasionaly 18 tany California ho an'ny besinimaro ny mpiasan'ny ala amerikana tao anatin'ny vanim-potoanan'ny afo efa niforona ho iray amin'ireo ratsy indrindra amin'ny firaketana.
Ny mponina ao amin'ny tanàna fialantsasatra malaza any California, South Lake Tahoe, eo amin'ny sisintanin'ny fanjakana miaraka amin'i Nevada, dia nasaina nankany atsinanana androany, niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana isan-trano mba hahazoana antoka fa nanaiky ny baikon'ny famindran-toerana ny rehetra, satria nirehitra ny afo. .
Ny baiko famindram-pahefana tsy maintsy natao dia navoaka tao amin'ny tanàn-dehibe Resort South Lake Tahoe, California as the Caldor Fire - iray amin'ireo doro tanety 20 lehibe mirehitra ankehitriny ao amin'ny Golden State - nakatona. Ny sary avy any South Lake Tahoe dia nampiseho rivotra setroka, ary ny sary avy any amin'ny toeram-pialofana Sierra-at-Tahoe 12 kilaometatra atsimo dia niseho mpamono afo, ampian'ireo tafondro misy lanezy ao amin'ilay toeram-pialan-tsasatra, miezaka mafy mitazona ny afobe.
Olona 24,000 eo ho eo no efa nandao ny tranony teny amin'ny arabe mampitohy an'i South Lake Tahoe sy Sacramento. Ny afo dia nanimba trano efa ho 500, nandratra olona dimy, ary nandoro 177,000 XNUMX hektara mahery, araka ny angom-baovao avy amin'ny Cal Fire.
Ny afo tao Caldor dia 14% monja no natolotry ny alatsinainy tolakandro, ary ny mpamono afo any Riverside sy San Diego Counties, atsimon'ny Los Angeles, dia niatrika olana mitovy amin'izany amin'ny fifehezana ny Fire Chaparral. Lahatsary mampihetsi-po nalaina tamin'ny faran'ny herinandro dia nampiseho helikoptera nanary rano be dia be tao anaty afo, izay nokapohina tamin'ny tadio.
Ny doro tanety dia tranga voajanahary ao California, na dia tompon'andraikitra sy mpahay siansa aza dia nanome tsiny ny fiovan'ny toetrandro noho ny fanitarana ody maina sy ny fanamafisana ny hamafin'ny afo. Ny manam-pahefana any California koa dia nomelohin'ny manam-pahaizana sasany - sy ny filoha teo aloha Donald Trump - noho ny tsy fitantanan'izy ireo amin'ny ala.